ဂါထာ Archives ⋆ Lovely Myanmar
By Aung Aung on Friday, May 24, 2019
ငွေဝင်ကြမ်းစေသောသရဏဂုံပဋ္ဌာန်း ပုတီးစိပ်နည်း .. ..
သထုံဆရာကြီး ဦးဘရှင်ပေးသော ပုဏ္ဏက တိုက်တာချက်ချင်းပျောက်စေသည့်သုတ်
By Aung Aung on Sunday, April 21, 2019
မင်္ဂလာ ပါပုဏ္ဏက တိုက်တယ်ဆိုတာ ဗုဒ္ဓစာပေမှာ ပုဏ္ဏက ဘီလူး ဆိုတာရှိတယ်ပုဏ္ဏက ဘီလူးက ကြမ်းတော့ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း သရဲချောက်တာ ပုဏ္ဏက တိုက်တယ် လို့ ပြောဆိုပုံ ရပါတယ်အခု မန္တလေး မြို့ပေါ်က အိမ်တအိမ် ပုဏ္ဏက တိုက်တာ ခံနေရတယ် အလိုလို မီးတောက်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာတယ်မီးတော့ မလောင်သေးဘူးဒါပေမဲ့ မီးသတ်ကားတွေ အဆင်သင့် စောင့်နေကြတယ်လူတွေကလဲ ပုဏ္ဏက တိုက်တာလို့ပြောပီးဘုန်းကြီးပင့် ပုရိတ် ရွတ်ကြတယ် ပရိတ်ရွတ်ပေမဲ့ ချက်ခြင်း မပျောက်ဘူးဒီ နေရာမှာ ကျွန်တော် ပြောချင်တာကပရိတ်ရွတ်ပေမဲ့ သရဲ တချို့က မကြောက်ဘူး ပုဏ္ဏက တိုက်တာ ချက်ခြင်း ပျောက်စေတဲ့သုတ် တခုရှိတယ်အဲဒီ သုတ် ရွတ်ရင် ပုဏ္ဏက တိုက်တာ ချက်ခြင်းပျောက်သွားတယ် ပြောပါတယ်ရန်ကုန် ကံဘဲ့မှာ မိုးကောင်းဘုရား …
အခက်အခဲတွေနဲ့ အရမ်း ကြုံနေရရင် ဒီ ဂါထာ လေး ရွတ်ကြည့်ပါ
By Aung Aung on Thursday, March 28, 2019
တစ်နေ့ ၇ ခေါက် ပုံမှန်ရွတ်ရုံနဲ့ ထူးခြားပါလိမ်မယ်။ #သိကြားမင်း ဂါထာတော် ဝေဒါသာကု ၊ ကုသာဒါဝေ …. ဒါယသာတ ၊ တသာယဒါ သာသာဓိကု ၊ ကုဓိသာသာ …. ကုတကုဘု ၊ ဘုကုတကု ဝေ = ငါ၏ရန်သူ ဟူသမျှတို့သည် …. ဒါ = ဝေးစွာသော အရပ်သို့ …. သာ = လျင်စွာ …. ကု = ပြေးကုန်သတည်း။ ကု = ငါ့အား မကောင်းသဖြင့် ကြံကုန်သောသူတို့သည် …. သာ = မိမိအလိုလို …. ဒါ = အကြံအစည် ပျက်သောအားဖြင့် …. ဝေ = …
ထီပေါက် ချဲပေါက် ကံပွင့်စေနိူင်သောနည်းလမ်းကောင်းလေး …..
ထီပေါက် ချဲပေါက် ကံပွင့်စေနိူင်သောနည်းလမ်းကောင်းလေး အောက်ဘက်တွင် ဖော်ပြထားသော ဂဏန်းရှစ်ခု သဗ္ဗညု ဘုရားပုံတော်ကို သင်၏ ဘုရားကျောင်း ဆောင်တွင် သေသေချာချာ ကျကျနန ကိုးကွယ်၍ ဆွမ်း ၊ ရေချမ်း ၊ ပန်း ၊ဆီမီး တတ်နိုင်သလောက် ကပ်လှူ ပူဇော်ကာ အောက်ဘက်တွင် ဖော်ပြထားသော ဂဏန်ဘုရား ရှစ်ခိုးဖြင့် ပုံမှန် ဘုရားဝတ်တက်ကာ ဂဏန်း နံပါတ်များနှင့် ပါတ်သက်၍ ကံကောင်း စေကြောင်း ဆုတောင်းကြပါကုန် ။ ဂဏန်း ဘုရားရှိခိုး ၁။ ဧကော – လောကဓာတ် တစ်ခုမှာ တစ်ဆူတည်းသာလျှင် အတူမရှိ ။ အတုမရှိ ပွင့်တော်မူကြကုန်သော မြတ်စွာဘုရားတို့အား ။ နမော – ရှိခိုး ပါ၏ အရှင်ဘုရား …
အခက်အခဲတွေနဲ့ အရမ်း ကြုံနေရရင် ဒီ ဂါထာ လေး ရွတ်ကြည့်ပါ …..
By Aung Aung on Thursday, March 21, 2019
By Aung Aung on Saturday, March 9, 2019
#သာမညဆရာတော်ဘုရားကြီးအထူးပေးသောဂါထာ ဥုံ- သိဒ္ဓိဘုရားထိပ်မှာထားနားမှာ ဗြဟ္မာ ၊ လက်မှာ သိကြား ၊ ခါးမှာ ဘီလူး ၊ ဒူးမှာ ခြင်္သေ့ ၊ ခြေမှာ နဂါး ၊ ကိုယ်မှာ ဂဠုန်၊ အစောင့်ထားပါ၏ ။ ဥုံ – ကောက္ကုသံ ၊ ဥုံ – ကောဏဂုံ ၊ ဥုံ- ကဿဖ ၊ ဥုံ – ဂေါတမ ၊ ဥုံ – အရိမေတ္တယျ ၊ ဥုံ – ဒီပင်္ကရာမြတ်စွာဘုရားကို ကိုးကွယ်ပါ၏ ။ ဓာတ်တော်ဝင် ၊ မဟာဝင် ၊ ဧရာဝင် ၊ မဟာဝိနယော ၊ ဗောဓိရှစ်တန် ၊ …
ရသေ့ကြီး ဦးခန္တီ ရွတ်သော အလွန် အကျိုးပေးသည့် ဘုရားရှိခိုး
လာဘ် တိတ်နေသူများ ၊ ဈေးရောင်း မကောင်းသူများ ၊ အကြွေး မရသူများ ၊ အကြွေး မဆပ်နိုင်သူများ ၊ ငွေကြေး အခက် အခဲဖြစ်နေသူများ ၊အကြီး အကဲနဲ့ အဆင်မပြေသူများ ၊ အလုပ် အကိုင် တို့လို့ တန်း လန်း ဖြစ်နေသူများ ၊ လာဒ်ရွှင်ငွေဝင် လိုသူများ အတွက် အလွန်တရာ မှ လာဒ်ရွှင်စေသော ရသေ့ကြီး ဦးခန္တီရွတ်သော ဂါထာ ကို လက်ဆောင်ပေးလိုက်ရပါတယ် ခင်ဗျာ…. ကိုယ်တွေ့ တစ်ခု ပြောပါရစေ… 2012.12.31 နေ့ မှာ ငွေ ၆ သိန်း ပေးပါမယ် လို့ ကတိပြု ခဲ့တာပါ.. 29.12.2012 နေ့ မှာ လက်ထဲ …
By Aung Aung on Thursday, March 7, 2019
စံကင်း ဆရာတော်ကြီးဟာ ဒီပါဠိတော်ကြီးနဲ့ သူတို့မြို့မှာဖြစ်တဲ့ ကပ်ဆိုးဘေးကြီးတွေကို ပယ်ဖျောက်စေခဲ့တယ်။ တစ်ခါတော့ ရောဂါဘေးကြီးတွေ ကျရောက်လာလို့ လူတွေတအားသေကြတယ်။ ပရိတ်ရွတ်တာတောင် တော်တော်နဲ့မနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဒါ့ကြောင့် စံကင်း ဆရာတော်က အဋ္ဌာနမေတံပါဠိကိုပါထည့်ပြီး သံဃာတော်များကို ရွတ်စေတယ်” “အဋ္ဌာနမေတံပါဠိတော်ကြီးကိုရွတ်မှပဲ သေခါနီးလူနာတွေဟာ ရောဂါတွေပျောက်ကင်းပြီး အသက်ချမ်းသာရာပြန်ရသွားကြတယ်။ ကပ်ရောဂါ ဘေးကြီးလည်း ပျောက်ကင်းသွားတယ်။ ဆရာတော်ကြီးဟာ အဋ္ဌာနမေတံ ပါဠိတော်နဲ့အတူ တစ်ခြားဂါထာသုံးဂါထာကို လူလာတိုင်း နေ့စဉ်ရွတ်ဖတ်ဖို့ တိုက်တွန်းလေ့ရှိတယ်။ “ဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင် အသက်ရှည်ကျန်းမာစွာနဲ့ သာသနာပြု နိုင်တာဟာ ဒီပါဠိတော်လေးပုဒ်ကြောင့်ပဲလို့ ယုံကြည်တယ်။ ဒ့ါကြောင့် ဆရာတော်ရဲ့ စံကင်းရွာမှာ လေးထောင့်ကျောက်တိုင်ကြီး တစ်တိုင်စိုက်ပြီး ဒီပါဠိတော်လေးပုဒ်ကို ရေးထားတယ်။ နေ့တိုင်းမရွတ်ဖြစ်တောင် ကျောက်တိုင်ရှိရာ ရောက်လာလို့ တစ်နေ့တစ်ခါရွတ်လည်း အကျိုးမနည်းဘူးဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဒီကျောက်တိုင်ကြီးကို စိုက်ခဲ့တာပါ” စံကင်းဆရာတော်၏ သက်ရှည်ကျန်းမာ …
Zawgyi လပြည့်ည ရောက်တိုင်း ရွတ်ဆိုရမည့် ငွေပြည့် ငွေလျှံ ချမ်းသာစေမယ့် ငွေဝင်ဂါထာ ငွေဝင်ဂါထာဟု ကျော်ကြားသော ဒိဝါတပတိဂါထာတော် သဗ္ဗမင်္ဂလာဂါထာပါဠိတော် (၁) ဒိဝါ တပတိ အာဒိစ္စော ၊ ရတ္တိမာ ဘာတိ စန္ဒိမာ။ သန္နဒ္ဓေါ ခတ္တိယော တပတိ ဈာယီ တပတိ ဗြဟ္မဏော။ အထ သဗ္ဗ မဟောရတ္တိံဗုဒ္ဓေါ တပတိ တေဇသာ။ (၂) တာဒိသံ တေဇသမ္ပန္နံ ၊ ဗုဒ္ဓံ ဝန္ဒာမိ အာဒရံ။ နမက္ကာရာ နုဘာဝေန ၊ သဗ္ဗေ ပူရေ န္တု သင်္ကပ္ပါ။ ဂါထာတော် မြန်မာပြန် အနက် (၁) နေမင်းသည် နေ့အခါ၌သာ တောက်ပ၏။ လမင်းသည် ညဉ့်အခါ၌သာ …